Amathuba amaninzi okusebenzisa i-Web GIS namhlanje-iGeofumadas
Zininzi amathuba okusebenzisa i-Web GIS njengamanje
Agasti, 2017 ArcGIS-ESRI, Iiphotography, Geospatial - GIS
Isihloko sokubeka amazwana namhlanje GIS yewebhu. Ngokuba 'uninitiated', inokuguqulelwa nje ngokuthi 'i-GIS kwiWebhu', kodwa oko kuthetha ukuthini ngempela? Ziziphi iindawo zalo? Kutheni 'kuninzi amathuba okufaka isicelo' njengoko kuchaziwe kwisihloko sale post?
Kukho izizathu ezihlanu zokuthi u-Eric van Rees usebenza kuye nqaku, ukubonisa (kunye nokusiqinisekisa) ukuba iWebhu ye-GIS okwangoku iyiyo-mfundiso ye-GIS yesikolo; kwaye, ngaphezu koko, ukuba olu tshintsho luquka ukuhluka kungekhona kuphela ngendlela Njani? sebenze i-GIS kodwa kwaye yiyiphi imimiselo efunekayo ukwenzela ukuzalisekisa ukusebenzisa i-geospatial technology.
Kwakhona kuya kusebenza ukuzibuza ukuba ngaba kuhlaziywa kwesi sihloko, njengoko sicinga ukuba sifanele sibe, siyazi okanye sinokuzicwangcisa ukuba singene elizayo kwi-Web ye-GIS njenjalo.
I-GIS ingaphezu kweCrographic, umlobi uqala ukufakazela ukuba "imephu ayiseyona injongo yokugqibela yomsebenzi, kodwa kunokuba ingaba yindawo yokuqala yokuhlalutya kwexesha elide nangaphezulu." Lo mbono weemephu 'njengengxenye yepuzzli' ibhekisela kwindlela esekelwe ekuphuhlisweni kweeprojekthi ze-GIS eza kuba sisixhobo sokuqhuba umsebenzi. Luhlobo luni lweeprojekthi? Kubonakala ngathi, iindawo ezahlukeneyo nezingenakucingelwa ngeminyaka njengoko siza kubhenela kamva.
Kwaye i-GIS injalo, ngokuqinisekileyo, idluliselwe kwiiligi eziphambili ukusukela kula ma-60 akude xa ibona ukukhanya. Ishumi leminyaka elitsha lutshintsho lubekhona: kolwazi "Kuphi ngayo yintoni", Echazayo ngokucacileyo; ukwazi kakhulu "Yintoni yaye kutheni "lwendlela omiselwe okanye imisela into ngokucacileyo kwaye ngokuchanekileyo, esimisela isigaba ukulungiselela izixhobo ezitsha ngokupheleleyo nesigama geospatially ukuthetha.
I-GIS ngoku ifuna 'intsebenziswano'. Kulo tshintsho lokuguquguquka, umbhali uphinda kwakhona, umsebenzi ngamnye uyaxhomekeka. Kodwa kuya kulungeleka ukuma kweli nqanaba kuba uqinisekisa ukuba imisebenzi ye-desktop ye-GIS 'yexesha elide' yayimfuneko okanye 'umdwebi webalazwe' okanye 'umhlalutyi weGIS'. Oku sele kusinika intambo efanelekileyo kwingxoxo malunga nesithuba esilandelayo ukubeka izimvo malunga nohlolo kunye nomsebenzi kwi-GIS. Kuya kuba mnandi apha ukuba sizibuze (njengokuba kusengaphambili) yiphi yeminyaka eminyaka yokuziphendukela kwe-GIS njengamanje sisasebenza kumanye amazwe ethu... Ndingcono ukushiya apha ngenxa yokuba siyaphambukela kumxholo oyintloko.
UVan Rees uthi "okwangoku, abasebenzi base-GIS kufuneka babambisane nabanye abasebenzisi be-GIS ngelixa bephethe nga xeshanye yeeprojekthi zeeprotographic ". Apha siphakamisa igama elithi 'simultaneity'. Olu hlobo 'lwee-multi-tasking' kwinqanaba leprojekthi apho ngokuqinisekileyo umntu omnye kuphela unakho (qaphela imeko) yenza umsebenzi opheleleyo ngokupheleleyo. Le nto inengqiqo. Kungenxa yokuba imida yohlobo oluqhelekileyo lwe-GIS lwandisiwe, ulwazi oluninzi kwizifundo ezahlukeneyo lufuneka. Umbhali uyagxininisa: "Oku kubonisa ukuba iteknoloji ye-GIS iya kuba yinkampani ekhethekileyo kakhulu (ngaphantsi kwe-niche, ukuba siyayiguqulela ngokwenene)".
I-GIS yangoku ijoliswe kuluntu. Le ntetho entsha inxulumene nento echazwe ngaphambili. Imferensi yenziwe kwimeko yendlela efanayo kunye nokuphathwa kwezihloko ezahlukahlukeneyo kunye neemeko ezitsha apho kusetyenziswe khona iziganeko ezitsha kunye neengcamango. Ewe, bangaphi na? Umbhali usitshela ukuba "kunye nobuchwepheshe obuninzi be-geospatial ekhoyo, kuba akunakwenzeka sifunde zonke izixhobo ezikhoyo kwiimarike "kwaye ucebisa," kungcono zijolise kwaye zijolise kwiisethi zeemfuno okanye izicelo kunye inxaxheba kuluntu olubamelayo. "
Oku kusengqiqweni ngokufanayo. Ungazi ukuba ulwazi luhlaziywa rhoqo, ukuba into esiyaziyo namhlanje iya kuphantse-iphelelwe lixesha, kwaye, iphelelwe lixesha. Olu 'luhlaziyo' olusisigxina ekufuneka utitshala ngamnye aluthathe njengomceli mngeni wokuqhubeka 'kwikhondo lomsebenzi'. Ulwazi lukwi-Intanethi kwaye sifuna ixesha kwaye mhlawumbi ii-neurons ku funeka ukumboza yonke into. Inyaniso kukuba asikwazi. Yingakho intsebenziswano yeGitHub, GeoNet, GIS StackExchange kunye nezinye izixhobo ezifana I-ArcGIS Hub, esizichazayo ngoku ngelixa siphawula ukuba umbhali ubhekisa ngaphaya kwazo zonke iimveliso ze-ESRI ... Ewe, ukurhanelwa eceleni, siyavumelana nokuqiqa kwakhe.
I-Programming kunye ne-GIS ngoku ayinakuhlukaniswa. Sifike kwenye yeyona 'yintloko' izithuba zokuhlalutya. Mhlawumbi sifanele sisebenzise ukuguqulelwa kwangempela 'ibhokhwe(Sele sifikile apho siya khona, akunjalo?). Nangona uVan Rees ephawula ukuba, "iilwimi zenkqubo azenzelwanga ukuba zithathe indawo kodwa endaweni yoko kukwandisa itekhnoloji ye-geospatial", kuyacaca ukuba ayizukubakho enye indlela yokutsiba ukusuka 'kwimephu-kuhlalutyo lwe-geospatial' ukuya kwiNkonzo yeWebhu yangoku ngaphandle 'ingqiniba' phakathi. Kwaye okokuqala uthetha ngeArcPy, emva koko malunga ne-API entsha yeArcGIS, ekhankanya ekudluliseni iSciPy Stack… Amathala eencwadi kunye neephakeji ezisekwe kwiPython! (Pitoneros ... Present!) Kwaye uqaphele ukuba sele siphawule malunga nokubaluleka kokufunda kwiPython.
Kodwa, masingakulibali, sifuna bonise kwaye wabelane lwethu ulwazi Emva koko ziyavela Iincwadi zeJupiter kunye nomphathi wephakheji Anaconda ukuphucula imisebenzi yokusebenza.
Idesktop ye-GIS ibe yinxalenye ye-Web ye-GIS. Ukuqala ngokubhekisela kwiGoogle Maps yonyaka we-2005 kwaye nangona i-Google, njengoko umbhali ibonisa, ijolise ngakumbi kwimarike yabathengi kunokuba i-geospatial yezobuchwepheshe, okuthiwa "i-GIS imboni" ingafunda izifundo ezibaluleke kakhulu kumsebenzi weGoogle.
Ngoku, sithini ngokufanelekileyo ngokuthi "imboni ye-GIS" okanye "imboni ye-geospatial"? Ngaba kuya kuchaneka ukuthetha ukuba nayiphi na insimu / idilesi esebenzisa ulwazi lweendawo kunye neemephu ziyinxalenye ye-geospatial industry?
Ewe ngokunjalo. Sithetha ngeemoto, iibhayisikile eziqhagamsheleneyo, ii-UAV, inyani eqinisekisiweyo, okt zonke ezo teknoloji zinedatha yendawo kunye neemephu, zombini zangaphakathi nezesiqhelo, njengomnye wemithombo yazo ephambili yedatha. Into enomdla ngokwenene kwaye ityhila.
Yintoni efundwayo? Kwafundwa ukuba ezobuchwepheshe obuya kuguqula i-teknoloji ye-geospatial zingadibaniswa. Ngokukodwa usebenzisa mobiles, lwenkqubo ilifu, uhlalutyo lweenkcukacha ezinkulu, i 'inzululwazi data' nobukrelekrele ushishino, nto zonke izibonelelo fu inxulumene nkcakasana ngemisebenzi GIS ndawo. Utsho owakhuliswa umbhali, unako ukufikelela amacandelo GIS efini ngokusebenzisa browser web, kwaye enze uhlalutyo geospatial usebenzisa Python.
Olu hlalutyo sisiqalo nje seengxoxo eziqhubekayo. Kwindawo yokugcina inki yi-GIS efini, kodwa ngakumbi i-WebGIS kwixa elizayo. Ikamva 'eliqaqambileyo' apho iWebhu ye-WebGIS idityaniswe ngakumbi kubomi bemihla ngemihla kwilixa elizayo 'leedolophu ezi-smart' esele zibonwa ngabantu abaninzi kwaye ekufuneka sikulungele ukuthatha inxaxheba kuzo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini 3 27 evela 2.18 QGIS utshintsho
Post Next Iyafumaneka simahla-itemplate yokuguqula ulungelelwaniso lwe-UTM ukuya kwiJografiOkulandelayo »
Impendulo enye kwi "Amathuba amaninzi okusebenzisa i-Web GIS namhlanje"
inqaku Zintle kwi SIGWEB (WebGIS), I baneembono ezininzi kulo mba, kuyo yonke into enxulumene nemveliso engundoqo GIS zemveli baba iminyaka emininzi iimephu engatshintshiyo, nokuba kula maxesha jikelele, ngoku iimephu Banikezela ngamandla kwaye bengenawo umda, bondliwa yiintlobo ezininzi ze-geodata, ezivela kwimithombo eyahlukeneyo kunye nemvelaphi, ngaphandle kweengxaki ezininzi zobuchwepheshe.